के मेरो यो; नी ठीक छ ? (स्त्रीरोग विशेषज्ञलाई यो; नी सम्बन्धी सोधिएका पाँच प्रश्न ) – Ramailo Sandesh
एजेन्सी – स्वस्थ राम्रो र आकर्षक देखिने चाहना कसमा पो हुदैन र ? अझ महिलाहरुमा त झन् यस्तो चाहना बिशेषरुपमा देखिने गरेको छ ।
शरीरलाई फिटनेश राख्नका लागि महिलाहरुले विभिन्न योगा तथा तथा व्यायम गर्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिइन्छ ।त्यस्तै आकर्षक बन्न विभिन्न कम्मेटीक सर्जरीहरु समेत गर्छन् त्यसलाई समेत अश्वभाविक मानिदैन । तर हिजोआजका महिलाहरु त्यतिमै मात्र सिमित रहँदैनन् ।
किंशवे गाइनोकोलोजी क्लिनिकका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा अहमद इस्मेल भन्छन् अहिले हिजोआज महिलाहरु बाहिरबाट देखिने अंगको सौन्दर्यमा मात्रै खुम्चिदैनन् । उनीहरु अहिले गु ;प्तांगको सौन्दर्यमा लालयित छन् ।
योगा गर्दा स्कीन टाइट जिन्स लगाएको बेला आकर्षक देखिनकै लागि धेरै महिलाहरु आफ्नो यो ;नीको प्लास्टिक सर्जरी गर्न खोज्दछन् । १६ वर्षे किशोरी देखि ७० वर्षे महिलाले पनि आफ्नो यौ ;नाङगको कस्मेटिक सर्जरी गर्ने चाहनाको जानकारी राख्न थालेपछि डा इस्मेलले आफूसंग आउने प्रमुख पाँच प्रश्न र जवाफ यसरी प्रस्तुत गरेका छन् :
१. के मलाई यो ;नीको सर्जरीको जरुरी छ ?
सबै यो ;नी यौ ;नाङगहरु पृथक र फरक हुन्छन् । जबसम्म यसको आकार बनोटले तपार्इँलाई दुःख पिडा तथा असुबिधा दिएको छैन, तपार्इँलाई सर्जरीको जरुरी हुन्न ।
२. के मेरो यो ;नी नर्मल छ ?
कुनै एक आकार, स्वरुप बनोट, रङ नै यो ;नीको उपयुक्त मापदण्ड हो भन्ने हुदैन । शरीरका अन्य अंगहरु जस्तै यो ;नीका भाल्भा, क्लिटोरीस, लेबिया पनि महिला पिच्छे फरक फरक हुन्छन् । त्यसैले ती फरक पनाका बाबजुत सबै यो ;नी नर्मल मान्नुपर्छ । र तिम्रो यो ;नी पनि नर्मल नै छ ।
३. के मेरो यो ;नीको लेबियाको लम्बाई ठिक छ ?
यो ;नीको लेबियाको नर्मल/ठिक्कको लम्बाई कति हो भन्ने जिज्ञासा धेरै भेटिने गरेको छ । कति लम्बाई देखिन्छ भन्ने कुरा ब्यक्ति पिच्छे फरक हुन्छ । सांस्कृतिक, भौगोलिक बिबिधताले पनि यसको लम्बाईमा फरक पार्छ ।
जब सम्म तपाईँको यो ;नीको लेबियाहरु स्वस्थ र सफा छन् र तपार्इँलाई कुनै शारीरिक पिडा छैन भने लेबियामा प्लाष्टिक सर्जरीको जरुरी हुदैन ।
कहिले काँही भने लेबियाको लम्बाई बढी भएर कपडा लगाउँदा तथा यौ ;न सम्पर्कको बेला समस्या हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा भने लेबिया प्लास्टिक सर्जरी गरी लेबियाको लम्बाई घटाउन सकिन्छ ।
४. उमेरसंगै यो ;नीमा कस्तो परिवर्तन आउँछ ?
शरीरका अन्य अंगहरुजस्तै समय संगै यो ;नीमा परिवर्तन आउनु स्वभाविक हो । त्यसमाथि महिलाले उमेरसंगै अनुभव गर्ने महिनावारी सुरु, गर्भधारण, बच्चाको जन्म, महिनावारी बन्द आदिको कारणले यो ;नीको रुप आकार बनोट परिवर्तन भइरहन्छ ।
५. मेरो र उसको यो ;नीको किन फरक देखिन्छ ?
आफनो शरीरको भागहरु स्वस्थ र ठीक छ की र्छैन भन्ने जिज्ञासा पूरा गर्न मानिसहरु अरुको अंग संग तूलना गर्ने गर्छन् । यहि जिज्ञासा यौ ;नीमा पनि भेटिने गरेको हो ।
संसारका अलग अलग भागका महिलाको यो ;नीको बनोट फरक हुन्छ । चाइनीज महिलाले आफ्नो यो; नी पूर्वी यूरोपका एक महिलाको यो ;नीसंग तुलना गर्न खोजिन भने निश्चयपनि ठूलो फरक पाउने छिन् ।किनकी चाइनीज महिलालाई रसयिन महिलाको यो ;नी धेरै ठूलो लाग्न सक्छ भने रसियनलाई चाइनिज महिलाको यो ;नी सानो र टाइट लाग्न सक्छ । त्यसैले अर्कोसंग तुलना गर्नु बिल्कुल गलत हो ।